के हो हिस्टेरिया ? महिलामा किन हुन्छ बढी ? जानौं – Kavrepati
Home / प्रमुख समाचार / के हो हिस्टेरिया ? महिलामा किन हुन्छ बढी ? जानौं
admin3weeks ago	प्रमुख समाचार Leaveacomment 1,999 Views
हिस्टेरिया भन्ने बित्तिकै यौनसँग सम्बन्धित रोग हो भन्ने धेरैको बुझाई छ । तर, यो बुझाई सही होइन । हिस्टेरिया यौनसँग सम्बन्धित भएर मात्रै लाग्ने रोग होइन । नेपालमा हिस्टेरियाका बिरामीहरू धेरै रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ ।हिस्टेरियालाई कन्भर्जन डिसअर्डर पनि भनिन्छ । के हो हिस्टेरिया वा कन्भर्जन डिसअर्डर ? यो लाग्ने कारण र बच्ने उपायबारे नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रदिप पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी :-
Previous प्रेमीको ८७ वर्षीय बुवा पालेर बसेकी लक्ष्मीको अधुरै भयो विवाह गर्ने सपना, साउदीवाट प्रदीप नआउँदै आफै अस्ताइन्
Next १७ वर्षीय बहिनी र २२ वर्षीय दिदि बहिनीले गरे कसैले सोच्नै नसक्ने काम ! प्रहरी पनि पर्यो छक्क